01/03/12 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
AutoCAD 2010/2012 နှင့် (အသုံးပြုပုံ 2004 to 2013 Ebook များ)
Friday, March 30, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်5comments
C-box မှာ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ တောင်းဆိုနေကြလို့ ထုံးစံ အတိုင်း မွှေနှောက်ရှာဖွေပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကျနော်ကတော့ AutoCAD နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တလုံးမှ နားမလည်ပါဘူး ...:D
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း အင်ဂျင်နီယာ တွေ တခါထဲ လေ့လာလို့ရအောင် AutoCAD 2004 ကနေ AutoCAD 2013 ထိ အသုံးပြုနည်း English Ebook တွေပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။
AutoCAD 2004 to 2013 Ebook
ဒီ AutoCAD 2010 က အဆင်မပြေကြဘူးဆိုလို့ ပြန်ရှာပြီး ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒေါင်းနည်းကတော့ Link တခုချင်းကို Select မှတ်ပါ ပြီးရင် Right Click မှာ Open Link ဖြစ်ဖြစ် Open Link in new tab ဖြစ်ဖြစ် တခုခု ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.... အဆင်ပြေကြပါစေ...။ CAD 2010 က ရှာရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျာ..2012 , 2013 ဆိုရင် အဆင်ပြေတယ်...။
ဒါကတော့ Portable လေးပါ www.4shared.com မှာ Register လုပ်ပြီးဒေါင်းယူရမှာပါ..။
ဒါကတော့ AutoCAD 2012 ပါ လိုအပ်သူများအတွက် တခြားတနေရာကနေ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ..။
Download AutoCAD 2012 Keygen
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်းးး
Ccleaner business edition v.3.17.1688 (Latest Version 27 March 2012)
Friday, March 30, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
Ccleaner လေးကိုတော့ အားလုံးသိကြပြီးသားပါ...Update လေးထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Get ‘like new’ performance without buying new PC
Friday, March 30, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
[ ကျွန်တော့်နာမည် အနီ ပါ flashsong to 3gp,mp4 converter fullversion လေးလိုချင်လို့ပါ ]
တောင်းဆိုတဲ့ အနီ ရေ ဧကန်တ ဗွီဒီယိုတွေကို Moblie ဖုံးထဲကို ထည့်ဖို့ထင်ပါတယ်...။ Format Factory (သို့) FreeMake တွေကိုလဲ သုံးလို့ရပါတယ်...ကောင်းပါတယ် ဒါလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လေးသုံးလို့ရတာပေါ့...:) ကျနော့ Blog မှာလဲ စုံသွားတာပေါ့လေ...:)
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကတော့ တမျိုးပဲဗျ...ဖိုင် တစ်ခုထဲမှာပဲ ဆော့ဝဲလ် ရော Key ရော ပေါင်းထည့်ထားတာ...:) သုံးတတ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်...။
Download FLV to Mp4 3gp
Photoshop Portable CS1, CS2, CS3, CS4, CS5
Friday, March 30, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်9comments
[ birdgyi: ကိုဝင်းရေ photoshop cs5 ဆော့ဝဲလ် လေးတင်ပေးပါအုံး ]
CS1 ကနေ CS5 ထိ Portable တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒါလေးကတော့ Ziddu.com ကတင်ထားတဲ့ cs5 လေးပါ...
Download Photoshop CS5 Full Version Portable
Download Link တွေ အလုပ်မလုပ်တော့ရင် အကြောင်းကြားပေးကြပါခင်မျာ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
Thursday, March 29, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်9comments
C-box မှာ မေးမေးနေတာ နှစ်ယောက် သုံးယောက် ရှိနေပါပြီ...ဘယ်ကနေ စ ပြောရမှန်း မသိလို့ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်...:)
ကျနော်တို့ Blog လေး စ လုပ်ခဲ့တုံးကလဲ ဒီ စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ စ ခဲ့ရတာပါ..။ ကျနော့ အတွေ့အကြုံ အရဆိုရင်တော့ တကယ်တမ်း Blog တစ်ခု လုပ်တယ်ဆိုတာ လွယ်မယောင်နဲ့ ခတ်ပါတယ်...
အချိန်လည်းအများကြီးပေးရပါတယ်...သူများ Blog တွေ လိုက်ကြည့်ပြီး တော်ကြာ C-box လေး တော်ကြာ Facebook funpage , Template ,Hrader , Menu .... စ တာတွေကို တခုပြီး တခု စိတ်ရှည် လက်ရှည် နဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင် တဖြေးဖြေချင်း ပြင်ယူရပါတယ်....
.နောက်ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် Blog တခု လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် တဖြေးဖြေး သိလာပါလိမ့်မယ်..။ C-box မှာ လာမေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်မဖြေနိုင်တာကလဲ ခု Blog နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်ထိုင် စ ပြုနေပြီဆိုတော့ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့တာတွေ များတယ်လေ...:D
ဒါကြောင့် Blog လုပ်ချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လေ့လာလို့ အဆင်ပြေအောင် ကိုညီလင်းဆက် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးကို (မသိသေး , မရှိသေး သူများအတွက်) ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. တော်တော် လေး လဲ ပြည့်စုံပါတယ်..။
အသိပညာ အတတ်ပညာ များ မျှဝေပေးရင်း ဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်ကြပါစေ...။
Click Here to Download ဝင်းကမ္ဘာကျော်(နည်းပညာမှတ်တမ်း)
Thursday, March 29, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
မိမိ ကွန်ပြူတာ ထဲက Driver တွေ Update လုပ်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် Driver တခုခု လိုနေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလိုလျောက် ရှာဖွေပေးပြီး Update , Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...။ ဖိုင်ဆိုက်လေးက 379.19KB ပါ....ဆောင်လည်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ..။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
Description: Updating System Drivers makes your computer run better. It prevents device errors and can even lend quicker repairs to future problems. SlimDrivers and DriverUpdate allow you to remove and update obsolete driver versions to prevent conflicts and maximize computer stability.
Download SlimWare Utilities DriverUpdate
Kaspersky March 25th keys for all versions
ဒီ Kaspersky ကိုတော့ ကျနော် မသုံးပါဘူး အလုပ်ရှုတ်လွန်းလို့ပါ ....:)
ဒါပေမဲ့ Kaspersky ချစ်သူတွေ အတွက် ဒီနေ့ ( 28/3/2012 ) ထွက်တဲ့ Update Key လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
How to activate Kaspersky license usingakey file ;
Please follow the below steps;
Step-1. Open Kaspersky License Manager (from lower right corner).
Step-2. Click ‘Activate the application withanew license’ button. (Delete any trial key first, by clicking the red X next to the key).
Step-3. Disable your internet connection (either disable Network adapter from control panel or turn off your modem/router).
Step-4. Select ‘Activate commercial version’ and enter the activation license code as 11111-11111-11111-1111X
Step-5. Click Next, an error dialog box will open as shown below:
Step-6. Click Ok and you will now get the option to activate kaspersky usingakey file.
Step-7. Browse to the key location and activate kaspersky.
Download Kaspersky Kye
Huawei ဖုန်းများအတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font နှင့် Keyboard ထည့်သွင်း အသုံးပြုနည်း
Wednesday, March 28, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
[ စိုင်းစိုင်း: အစ်ကိုရေ Huawei ဖုန်းတွေ root နဲ့ myanmar font ထည့်ချင်ရင်ကော ပြောပြပေးပါလား ]
ကျနော့ မှာ Huawei ဖုံး မရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ်တိုင် ရှင်းမပြနိုင်ပါဘူး...:)
ဒါပေမဲ့.... ကျနော် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် ထားတာ မဟုတ်သည့်တိုင်... နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာ့ ဆရာတွေ ရေးသား ထားသမျှတွေကို အများ အကျိုးအတွက် မွှေနှောက်ရှာဖွေပြီး ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်...။ ဓာတ်ပုံ ကိုတော့ ပို့စ်လေးနဲ့ တူအောင် Google ကနေ ခိုးပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...:D
CDMA 800MHz ဖုန်းများဖြစ်သော Huawei C8500, C8600 ဖုန်းများအတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font နှင့် Keyboard ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုသူများအတွက် ထည့်သွင်းနည်း အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် လိုအပ်သော Installer များကတော့ z4 root, FontChangerLite နှင့် MyanDroid Keyboard စသည်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ FontChanger အတွင်း သို့ ထည့်သွင်းရန် Myanmar Unicode.ttf နှင့် Zawgyi.ttf စသည့် Font များလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Software များကို ဖုန်းအတွင်းသို့ Install မပြုလုပ်ခင် ပထမဦးစွာ ဖုန်းအတွင်းရှိ Setting ထဲမှ Applications အတွင်းသို့ဝင်ပြီး Unknown Sources ကို အမှန်ခြစ်ပေးရပါမည်။ ထို့ပြင် Applications ထဲမှ Development ထဲဝင်ပြီး USB debugging ကိုလည်း အမှန်ခြစ်ပေးရပါမည်။ ဖုန်းကို Root ပြုလုပ်ခြင်း Software ထည့်သွင်းရာတွင် z4 root ကို အရင်ဆုံး Install ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် z4 root အတွင်းသို့ဝင်ပါ။ Superuser Request ပေါ်လာလျှင် Remember ကို အမှန်ခြစ်ပြီး Allow ကိုနှပ်ပါ။ ပြီးနောက် Root ကို ရွေးချယ်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါ ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီး ဖုန်းမှာ Restart ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းပြန်ပွင့်လာပါက Root လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ FontChanger Life ထည့်သွင်းခြင်း Root လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပါက FontChangerLite Software ကို Install ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဖုန်းအတွင်းသို့ FontChangerLite Software ကို ထည့်သွင်းပြီးပါက ဖုန်းကို Computer ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး SD Card အတွင်းသို့ ၀င်ကြည့်ပါက FontChanger ကိုတွေ့မြင်ရပြီး ထို FontChanger အတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font များဖြစ်သည့် Myanmar Unicode.ttf နှင့် Zawgyi.ttf ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ပြီးနောက် Computer နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကိုဖြုတ်၍ ဖုန်းအတွင်းရှိ Font Changer Lite အတွင်းသို့ဝင်ကြည့်ပါက ထည့်သွင်းထားသော Fonts နှစ်ခုကို တွေ့မြင်ရပါ မည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Font ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ MyanDroid Keyboard ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း FontChanger Lite အတွင်း Font ကို ရွေးချယ်ပြီးပါက MyanDroid Keyboard Software ကို Install ပြုလုပ်ရပါမည်။ Keyboard ကို ထည့်သွင်းပြီးပါက ဖုန်း Setting အတွင်းရှိ Language & Keyboard အတွင်းသို့ဝင်ပြီး MyanDroid Soft Keyboard ကို အမှန်ခြစ် ပေးရပါမည်။ အထပ်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးပြုလုပ်ပြီးပါက ဖုန်းအတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font နှင့် Keyboard ထည့်သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာ Keyboard ကို အသုံးပြုရန် Browser (သို့) Message ပို့သော နေရာသို့သွားပြီး Android Keyboard ပေါ်ရှိ ( ?123 ) ခလုပ် (သို့) စာတန်းပေါ်သော နေရာလွတ်ကို ဖိနှိပ်ထားပါ။ Keyboard Menu ပေါ်လာလျှင် Input Method ကို နှိပ်၍ MyanDroid Soft Keyboard ကို ရွေးချယ်ပေးပါက မြန်မာစာ လက်ကွက်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်သော Keyboard ပေါ်လာပြီး စတင်အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် တွေကိုတော့ ပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ဒေါင်းမရလို့.... ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
ဒီမှာနှိပ်ပြီး လိုအပ်သည့် ဆော့ဝဲလ် များ ဒေါင်းယူပါ..။
Wednesday, March 28, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
[ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော်ရေ dvd to vcd converter ကောင်းကောင်း ကလေးဘယ်နေရာကနေရနိုင်မလဲခင်ဗျာ..]
ဖိုင် ဆိုက်ဒ် သေးသေး လေး နဲ့ DVD ကနေ Format တော်တော်များများကို Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter လေးပါ..။ ဖိုင်ဆိုက်ဒ်က 987.18KB ပါ..။ လိုအပ်လို့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။။
DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter is an easy to use DVD copying and ripping software which can copy DVD to VCD/SVCD/MPEG/DIVX AVI files.DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter is an ideal method to dup dvd or make Backup DVD copy. You can rip entire DVD or just part of it by time or by frame or by chapter.
Powerful wizard will help you to complete conversion setting in several steps.
The latest version of DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter is optimized for P4 CPU.So,You have found the fatest encoder/decoder of the world here.
DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter can convert DVD to AVI DIVX,convert DVD to VCD,convert DVD to SVCD,convert DVD to Mpeg and Burn them to CD.
DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter isaDVD to AVI converter,DVD to VCD converter,DVD to SVCD converter,DVD to Mpeg converter all in one software.
Tuesday, March 27, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ဒီ ဆော့ဝဲလ် လေးကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ 24/03/2012 နေ့ကထွက်တဲ့ Update လေးမို့ ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ..။
လေးလံ နှေးကွေးနေတဲ့ Firefox, Skype, Chrome, Thunderbird စ တာတွေကို မြန်ဆန် သွက်လက် လာအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ပါ...အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်...။
SpeedyFox for Windows (570 KB)
SpeedyFox for Mac OS X (800 KB)
Uninstall Tool 3.1.1 build 5236 Final + Crack
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေးနဲ့ မလိုတော့တဲ့ Programs တွေ Software တွေကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှင်းထုတ်ပေးပါတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ...။
Download Uninstall Tool 3.1.1
16 Free File Recovery Software Programs - Freeware (Free Recovery ဆော့ဝဲလ် (16) မျိုး)
Free လေးတွေဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့လေ...:D.... လိုအပ်သူများ ဒေါင်းယူ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် recovery ဆော့ဝဲလ် 16 မျိုး စုစည်းပေးထားတာပါ..။
Many free file recovery programs exist that can help recover your accidentally deleted files. These file recovery programs can help you "undelete" files on your computer.
Files you have deleted and then recently emptied from your Recycle Bin are often still present on your hard drive (or USB drive, or media card, etc.) and can be recovered using free file recovery software.
Important: You can greatly increase the chance of recoveringafile by minimizing your computer use as soon as possible. Your first step should be to installafree file recovery program.
Undelete files you thought were gone forever with any one of these freeware file recovery tools:
Recuva v1.40.525 Review and Free Download
Glary Undelete is said to work in Windows Vista, XP, 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95 but I had no problem recovering files with it in Windows 7.
Glary Undelete v1.6 Review and Free Download
Pandora Recovery is another excellent free file recovery software program. It's super easy to use and has the best wizard to help you undelete files that I've seen in any file recovery app.
A more advanced "Surface Scan" is available in Pandora Recovery that should recover more files than the standard search as long as they are ofapopular format.
Pandora Recovery will undelete files from hard drives, memory cards, etc. Nearly anything that stores files that you can also connect to your PC should be supported.
Pandora Recovery lists support for Windows Vista, XP, Server 2003, and 2000 but it worked perfectly well for me in Windows 7.
You will need to install Pandora Recovery to your hard drive which isamajor reason I haven't ranked it higher than some other file recovery tools.
Pandora Recovery v2.1.1 Review and Free Download
SoftPerfect File Recovery is another superb file undelete program. It's very easy to search for recoverable files. Anyone should be able to use this program with very little trouble.
SoftPerfect File Recovery will undelete files from hard drives, memory cards, etc. Any device on your PC that stores data (except for your CD/DVD drive) should be supported.
SoftPerfect File Recovery supports Windows Vista, XP, Server 2008 & 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95. According to SoftPerfect, 64-bit versions of Windows operating systems are also supported.
SoftPerfect File Recovery isasmall, 500KB, standalone file making the program very portable. Feel free to run File Recovery fromaUSB drive or floppy disk.
The Restoration file recovery program is similar to the other free undelete apps on this list.
The thing I like most about Restoration is how incredibly simple it is to recovery files. There are no cryptic buttons or complicated file recovery procedures - everything you need is on one, easy to understand program window.
Restoration can recover files from hard drives, memory cards, USB drives, and other external drives.
Restoration supports Windows Vista, XP, 2000, NT, ME, 98, and 95. I successfully tested Restoration with Windows Vista.
Like some of the other popular file recovery tools on this list, Restoration is small and does not need to be installed, giving it the flexibility to be run fromafloppy disk or USB drive.
Restoration Free Download
6. Avira UnErase Personal
Avira UnErase Personal has to be one of the most simple free file recovery programs I've ever used.
After installation (there is no standalone version), you'reasingle click from seeing every deleted file onadrive. Recoveringafile with Avira UnErase Personal isasingle click operation as well.
UnErase Personal can recover files from hard drives, USB drives, memory cards, and other similar sources.
According to Avira's documentation on UnErase Personal, the program should work with Windows XP and Windows 2000 Pro only. However, I also successfully tested Avira UnErase Personal with Windows Vista.
Avira UnErase Personal Free Download
FreeUndelete is self explanatory - it's free and it undeletes files! FreeUndelete is another great file recovery tool, very similar to other undelete utilities around this rank in my list.
The major advantage of FreeUndelete is its easy to use interface and "folder drill down" functionality (i.e. files available for recovery are not listed inabig, unmanageable listing).
FreeUndelete will recover files from hard drives, memory cards, and other similar storage devices in or connected to your PC.
FreeUndelete supports all versions of Windows - Vista, XP, etc. I successfully tested FreeUndelete with Windows Vista.
Note: OfficeRecovery.com's website is often down. You can also download FreeUndelete from
FreeUndelete Free Download
8. ADRC Data Recovery Tools
ADRC Data Recovery Tools is another great, free file recovery program. File recovery with this program is uncomplicated and could probably be accomplished by the average computer user without any kind of documentation.
ADRC Data Recovery Tools should be able to undelete files from any non-CD/DVD storage device like memory cards and USB drives, as well as hard drives, of course.
Data Recovery Tools officially supports Windows XP, 2000, and 95 but I successfully tested data recovery with this program on Windows Vista.
ADRC Data Recovery Tools isastandalone, 132KB program making itavery portable file recovery tool that will easily fit on any removable media you might have.
9. CD Recovery Toolbox
CD Recovery Toolbox isacompletely free and very unique file recovery program. CD Recovery Toolbox is designed to recover files from damaged or corrupted optical drive discs - CD, DVD, Blu-Ray, HD DVD, etc.
According to the publisher, CD Recovery Toolbox should help recover files from discs that have been scratched, chipped, or have surface spotting.
One obvious con is the inability of CD Recovery Toolbox to recover files from hard drives or portable media drives. However, the program isn't designed to do that so I haven't held that fact against it.
CD Recovery Toolbox works in Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, NT, ME and 98. I tested CD Recovery Toolbox successfully in Windows Vista.
10. TOKIWA DataRecovery
TOKIWA DataRecovery is an effective file recovery program and is very similar to many others on my list.
The best thing TOKIWA DataRecovery has going for it is its ease of use. It hasasingle program window where you can scan for files to recovery, sort the files, and undelete them. There are no complicated procedures at all.
TOKIWA DataRecovery can recover files from hard drives, memory cards, USB drives, and other external drives.
DataRecovery supports Windows Vista, XP, 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95. I successfully tested TOKIWA DataRecovery with Windows Vista.
TOKIWA DataRecovery isastandalone, 412KB file making itacompletely portable tool suitable foraUSB drive or floppy disk.
TOKIWA DataRecovery Free Download
11. Undelete Plus
Undelete Plus isagreat free file recovery program but the program could useaserious face lift. The user interface needs work (i.e. some prominent buttons don't seem to do much) but overall it's an effective file recovery tool.
Undelete Plus can recover files from hard drives, external drives, and memory cards. Any drive using any popular file system should be accessible by Undelete Plus.
Undelete Plus will undelete files in Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95.
If you've been unsuccessful recovering files using other undelete programs on my list, try Undelete Plus. I don't think it's the best file recovery program out there but it might be the one that helps get your file back.
12. PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery is another good free file recovery program with an arguably "deeper" search for deleted files than other similar undelete programs.
PC Inspector File Recovery supports Windows XP, 2000, NT, ME, and 98. Windows Vista is not listed asasupported operating system. I tested File Recovery with Vista and could not get the program to work properly.
I'd recommend trying PC Inspector File Recovery only if another, higher rated file recovery program didn't do the job for you. The not-so-easy-to-use interface, lack of Vista support, and long hard drive scan times keep this file recovery app out of the Top 10.
13. EASEUS Deleted File Recovery
EASEUS Deleted File Recovery is another great file undelete program. Recovering files is very easy to do with justafew clicks.
My favorite aspect of EASEUS Deleted File Recovery is that the user interface is structured much like Windows Explorer. While that may not be everyone's ideal way to display files, it'savery familiar interface that most people are comfortable with.
EASEUS Deleted File Recovery will undelete files from hard drives, optical drives, memory cards, and pretty much anything else that Windows sees asastorage device.
Deleted File Recovery supports Windows Vista, XP, Server 2003, and 2000.
14. Recover Files
The aptly named Recover Files does just that and does it as well as any other average file recovery program.
Files located on hard drives, external drives, ZIP drives, memory cards, etc. are all recoverable by Recover Files. Anything that holds data that you can hook up to your computer is probably fair game for Recover Files.
Recover Files will undelete files in Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95. I tested the portable/standalone version of Recover Files in Vista.
Try Recover Files if another undelete program doesn't provide the results you like but you're probably better off starting withaprogram like Recuva (#1) or DiskDigger (#2).
Recover Files Free Download
15. NTFS Undelete
NTFS Undelete is another free undelete program. What I like most about NTFS Undelete is its Windows Explorer-like user interface, making it an easy file recovery tool for beginners to use.
The biggest downfall of NTFS Undelete is exposed in its name - it only supports file recovery on NTFS formatted drives. This means that NTFS Undelete will only work with some hard drives in Windows Vista and XP.
NTFS Undelete comes in an installable version and in an ISO version for use in creatingaportable CD version. This is notabootable ISO image.
I tested NTFS Undelete with Windows Vista and could not get the program to work properly with either the ISO image or the installable version. It did work fine in Windows XP with both versions.
NTFS Undelete Free Download
The free PhotoRec file recovery tool does the job but it isn't nearly as easy to use as other programs on my list.
PhotoRec is limited by its command-line interface and multiple step recovery process. However, my greatest problem with PhotoRec is that it's very difficult to avoid recovering all deleted files at once, not just the one or two you're after.
PhotoRec can recover files from hard drives, optical drives, and memory cards. PhotoRec should be able to undelete files from any storage device on your PC.
PhotoRec supports Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, NT, ME, 98, and 95. I tested PhotoRec in Windows Vista.
If another file recovery program hasn't worked, give PhotoRecatry. I just don't recommend making it your first pick.
PhotoRec Free Download
USB Safely Remove.v5.0.1.1164
phoe thar: brother ,,usb safely remove ,full version lo chin par tal,,,help me please.
USB Safely Remove လေး လိုချင်ပါတယ် လို့ C-box မှာပြောသွားလို့ လိုအပ်နေသူများပါ အဆင်ပြေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
USB Safely Remove saves time and extends user abilities on
active work with flash-drives, portable drives, card readers and
and other gadgets.
USB Safely Remove givesahandy safe removal, devoids of
annoyances of the native Windows tool, displays what programs
prevent stoppingadevice, hides drives of empty card reader
slots, allows to returnastopped devices back and has many
other features for comfortable work with hot-plug devices (USB,
SATA, Firewire, PCMCIA).
Download USB Safely Remove 5.0.1.1164
Kaspersky Antivirus 2012 Unlimited Trial Reset
Monday, March 26, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
( ၀ိုင်းချစ်: Kaspersky Antivirus AND Internet Security 2012 with NEW UPDATED Keys + Trial Resetter လေးလိုချင်လို့ )
Kaspersky Antivirus 2012 Resetter လေးကို တောင်းထားလို့ မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
Download Update Key
Sunday, March 25, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
ဒီ WinRAR 4.11 က ထွက်တာကြာနေပါပြီ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရှာပေးပါဆိုလို့ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
Install ပြုလုပ်ပုံကို မသိသေးသူများ အတွက် ကတော့ အောက်က နည်းလမ်း လေးအတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ပါ..။
မိမိကွန်ပြူတာနဲ့ သက်ဆိုင်သော winrar (32bit or 64bit) ကို install လုပ်ပါ။
ပြီးလျှင် winrar icon ပေါ်မှာ right click > properties> open file location ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆို အခု winrar ကို သွင်းထားတဲ့ folder ထဲရောက်နေပါပြီ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတုန်းက ပါလာတဲ့ Keygen လေးကို အဲဒီ winrar သွင်းထားတဲ့ဖိုဒါထဲကို ကူးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ Keygen လေးကို right click ထောက်ပြီး Run as Administrator ဆိုပြီး run လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာ Name, Type တွေကိုဖြည့်ပြီး Install License ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို သင့်ရဲ့winrar လေးက အခုဆို ကိုယ်ပိုင် နာမည်လေးနဲ့ Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။
Download WinRAR 4.11 final
Samsung Galaxy Ace Official Gingerbread 2.3 နှင့်အထက် Root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Saturday, March 24, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ကဲ...တော်တော်များများ တောင်းဆိုနေကြလို့ တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
မိမိရဲ့ Samsung Galaxy Ace ဖုန်းကို offical gingerbread update လုပ်ပြီးတဲ့အခါ
အများအားဖြင့် 2.3 နှင့်အထက် မြန်မာဖာင့်ထည့်ဖို့ SuperOneClick နဲ့ root လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
recovery mode ကနေ root file ကို install လုပ်ပြီ့း  root တဲ့နည်းလမ်း အခု ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပါ…
မိမိဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာ ချိတ်ဆက်ထားပြီး လုပ်စရာမလိုပါဘူး အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးပါ။
မိမိဖုန်းကို root လုပ်ပြီး မကြိုက်ပါက unroot ပြန်လုပ်နိူင်ပါတယ်။
မိမိဖုန်းကို root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းနှင့် unroot လုပ်နည်းရှင်းပြပါမယ်
အတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့ အမှားအယွင်းဖြစ်မှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်နိူင်ပါတယ်။
တခုခုဖြစ်မှာကိုကြောက်ရင်တော့ ကျွန်တော်က အရမ်းကြီးမတိုက်တွန်းပါဘူး။
(ဒါပေမဲ့ သင့်လုပ်နိူင်ပြီး အောင်မြင်နိူင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်)
အခုနည်းလမ်းက သင့်ရဲ့ဖုန်း Warranty မပေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ပြန်ပြီး unroot လုပ်နိူင်တဲ့တွက်
root လုပ်ဖို့တွက်လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်၂ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ အောက်မှာဒေါင်းလုပ်လင့်ပေးထားပါတယ်
Galaxy Ace 2.3 နှင့်အထက်ကို System Root လုပ်နည်း
1. ပထမဆုံး Root.zip file ကို Phone SD ကဒ်ထဲသို့ Copy ကူးပါ။
2. ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပေးပါ။
3. ဖုန်းရဲ့ recovery mode ကိုသွားပါမယ် ။ အဲတွက် HOME + POWER ကို တွဲနှိပ်ပေးပါ
ပုံမှန် ဖုန်းတက်လာနေကြတဲ့တိုင်း samsung logo နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ် Power ခလုတ် နဲ့ Home ခလုတ်ကို မလွတ်ပါနဲ့။
Galaxy Ace logo တက်လာပြီးသွားရင် recovery mode တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Home + Power ခလုတ် လွတ်ပေးပါ။
4. Recovery mode ထဲမှအသုံးပြုဖို့တွက် VOLUME UP နှင့် VOLUME DOWN ပြီးတော့ HOME ခလုတ်ကို အသုံးပြုပါမယ်။
5. Volume Down ခလုတ်ကို တချက်ချင်းနှိပ်ပြီး recovery mode ထဲမှ ” apply update from sdcard ” ကိုရွေးပြီး
HOME ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါ။
6. Volume Down ခလုတ်ကို တချက်ချင်းနှိပ်ပြီး Root.zip file ကိုရွေးပြီး HOME ခလုတ်နှိပ်ပေးပါ။
(ဖိုဒါနဲ့ထည့်ထားဆိုရင် ဖိုဒါထဲသွားပြီး Root.zip file ကိုရွေးပေးပါ ) ။
7. Root file install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလျှင် ” reboot system now ” ကို ရွေးပြီး ဖုန်း reboot ကျတာကိုစောင့်ပေးပါ။
8. ဖုန်းပြန်တာလာပြီ မိမိဖုန်းမှာ Superuser ကိုတွေ့ရပြီဆိုလျှင် မိမိဖုန်း Root လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
Galaxy Ace recovery mode ပုံပါ
” Congrats ! အခုလိုသင်ကိုယ်တိုင် Galaxy ace ကို root နိူင်တဲ့အတွက်ပါ ”
ပြန်ပြီးတော့ Unroot လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကနည်းလမ်းအတိုင်း ပြန်ပြီးလုပ်နိူင်ပါတယ်။
နည်းလမ်းလေးက ဆင်တူတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
Android ဖုန်း/Tablet ကို မြန်မာစာစနစ်နှင့် မြန်မာစာ Keyboard ထည့်သွင်းနည်း (Complete Guide) ကိုဖတ်ရှုရန်
Galaxy Ace 2.3 နှင့်အထက်ကို ပြန်ပြီး System UnRoot လုပ်နည်း
1. ပထမဆုံး UnRoot.zip file ကို Phone SD ကဒ်ထဲသို့ Copy ကူးပါ။
6. Volume Down ခလုတ်ကို တချက်ချင်းနှိပ်ပြီး UnRoot.zip file ကိုရွေးပြီး HOME လုတ်နှိပ်ပေးပါ။
(ဖိုဒါနဲ့ထည့်ထားဆိုရင် ဖိုဒါထဲသွားပြီး UnRoot.zip file ကိုရွေးပေးပါ ) ။
8. ဖုန်းပြန်တက်လာပြီ မိမိဖုန်းမှာ Superuser မရှိတော့ဘူးဆို မိမိဖုန်း UnRoot လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
Samsung Galaxy Ace တွက် Root File အားရယူရန်
Samsung Galaxy Ace တွက် UnRoot File အားရယူရန်
Samsung Galaxy တွက် Driver အားရယူရန်
ကွန်ပြူတာ admin password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Saturday, March 24, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
[ မင်းကို: အကိုကျနော့် ကွန်ပျူတာ ပက်ဝက်(စ်)ပေးပြီးမေ့သွားလို့..ပြန်ဖော်လို့ရမဲ့ ဆော့ဝဲလ် ရှိရင်တင်ပေးပါခင်ဗျာ ]
မွှေနှောက် ရှာဖွေကြည့် တော့ ဒါလေးကို သွားတွေ့ပါတယ် အခွေ နဲ့ Burn ပြီး Boot တတ်ရမှာပါ...။
အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် ကိုရော အသုံးပြုရမဲ့ PC Login Now ဆော့ဝဲလ် ကိုပါ သူ့ရဲ့ မူရင်း ဆိုက်ဒ် မှာပဲ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်...။
ဒါကတော့ ဒေါင်း ပြီးလို့ ရလာတဲ့ .exe ဖိုင်ကို ဒီ ImgBurn 2.5.6.0 ဆော့ဝဲလ် ကို
သုံးပြီး ဘယ်လို Burn ရမယ်ဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်..။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်စရာ မလိုလောက်အောင် ပြည့်စုံလှပါတယ်..။
ဒီမှာကတော့ Burn ပြီးရင် ဘယ်လို စ တင် လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာပါ..။
ဒါကတော့ mmitd က ကိုပြည့်ဖြိုး ပြန်လည် မျှဝေထားတာလေးပါ...အားလုံး အဆင်ပြေအောင် တနေရာထဲ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဒီ Software လေးက Window ရဲ့ Administrator Password နဲ့ Other User တွေရဲ့ Password တွေကို မေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မသိဘဲ ဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Passward တွေကို Remove လုပ်ပေးတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Folder ထဲမှာ ပါတဲ့ ISO File လေးကို CD ကူးလိုက်ပါ။ CD ရလာပြီဆိုရင် စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ။ ဒါဆို Window ပြန်တက် လာတဲ့ အခါ အခွေထဲမှာပါတဲ့ လုပ် ဆောင်ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါက Password ကို ဖျတ်ပြီး သားဖြစ် သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ File Size ကလည်း 9.82MB ဘဲရှိတဲ့အတွက် ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေ လွယ်ကူပါတယ်။ အောက်က Link မှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
All Window Password Remover
အပေါ်က ဆော့ဝဲလ် တွေ နဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ရင် (သို့ ) နားမရှင်းလို့ အခတ်အခဲ ဖြစ်နေရင်... အဆင်ပြေအောင် အသုံးပြုရမဲ့ ဆော့ဝဲလ် နဲ့ အတူ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် ကို တဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Windows NT/2k/XP/Vista/Win7 မှာ User Account ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Admin Acount ပဲဖြစ်ဖြစ် Password မေ့သွားရင် Offline NT Password&Registry Editor ကို အသုံးပြုပြီး Password ကိုဖျက်လို့ရပါတယ်။ သူခိုးလမ်းပြလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ Password မေ့သွားလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုမှမလုက်တက်တော့ရင် Window ပြန်တင်ရတာတို့၊ Service Center ပို့ရတာတို့ဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ အခန့်မသင့်ရင် မိမိရဲ့ Data တွေဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ် ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာရယ် ပြီးတော့ဒီ Software ကို မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်ရယ် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Offline NT Password&Registry Editor ကို CD နဲ့ အသုံးပြုလို့ရသလို USB ထည့်မှာ ထည့်သွင်းပြီးလည်း အသုံးပြုလို့လဲရပါတယ်။
Offline NT Password&Registry Editor ကို ဒီနေရာကနေ Download ဆွဲလိုက်ပါ။
Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ Zip File ကို Extract လုပ်လိုက်ပါက ISO ဖိုင် ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ISO ဖိုင်ကို CD နဲ့ အသုံးပြုရန်အတွက် Nero Burn အစရှိတဲ့ Burning Software ဖြင့် CD Burn လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး CD/DVD Drive ထဲ မိမိ ကူးထားတဲ့ ISO CD ကိုထည့်ပြီး Boot တက်လိုက်ပါ။ အောက်တွင်ပြထားသလိုမျိုး မြင်တွေ့ရပါမယ်။
boot: _ ပေါ်လာပါက Enter ကို ခေါက်လိုက်ပါ။
Windows ရှိတဲ့ Partition ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ Window အများစုမှာတော့ 1 ကိုပဲရွေးရရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ 1 ကိုပဲ ရွေးပါမယ်။ 1 မရမှ သာလျှင်2ကို ရွေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ 1 လို့ ရိုက်ပြီင်္း Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Registry လမ်းကြောင်းရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Enter သာခေါက်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က Password reset လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 ကိုရွေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
မိမိ Edit လုပ်လိုတဲ့ Username ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီရင် Enter ခေါက်ပါ။ (ကျွန်တော်ကတော့ Tim အမည်နဲ့ Acc ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် Tim လို့ရေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်။)
Password ကို ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
Password အသစ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်2လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ကတော့ Password ကို ဖျက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
Password Cleared ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Offline NT Password & Registry Editor ကနေ ထွက်ရန်အတွက် q လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
y လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အခုဆိုရင် Account ရဲ့ Password ပျက်သွားပါပြီ။ Window ပြန်တက်လာပါက Password မေ့သွားလည်း ပြသာနာမရှိတော့ပါဘူး။
AutoCAD 2010/2012 နှင့် (အသုံးပြုပုံ 2004 to 2013 ...
Huawei ဖုန်းများအတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font နှင့် Ke...
16 Free File Recovery Software Programs - Freeware...
ကွန်ပြူတာ admin password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?...
Generals - Zero Hour [Full ISO] [Direct Link]
How to IDM Uninstall & Install (internet download ...
Internet Download Manager v6.11 + Full Patch + Jus...
HTTrack Website Copier 3.45-3
All Microsoft Activation Pack 2011-2012
Allok MP3 to AMR Converter v3.0.2
Deep Freeze7pro (ကွန်ပြူတာတိုင်း ရှိနေသင့်တဲ့ ဆေ...
How To Create Karaoke Songs? ( Audacity နှင့် Kara...
Advanced Uninstaller PRO 11.21 Full
How to Fix Computer cannot Shutdown (Shutdown ချမရ...
CyberLink PowerDirector Ultra 10.0.0.1012 Full
Zawgyi Font လေးထောင့်တုံး ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း
PenDrive , Memory Card တွေထဲက ပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တေ...
Fix Errors & Speed Up Your PC (Scan & Repair PC Er...
Internet Download Manager 6.10 Build2Full (16 Ma...
Wise PC Engineer 6.42 Build 220 (ကွန်ပြူတာ သွက်လက်...
This copy of window is not genuine ပြဿနာ ဖြေရှင်းန...
VeryPDF PDF Editor v2.6 Full Version
Task Manager Fix (Task Manager ကိုခေါ်လို့မရရင်)
Photo DVD Maker Professional 8.35 and Serial
SpeedUpMyPC 2012 5.1.5.3 Full Serial
Windows7Loader v2.1.2-DAZ (Latest Version)
Microsoft Security Essentials (Internet Security)
Windows.7.Loader.v2.0.9.(x86-x64) Genuine Windows
NEW UPDATE: Mozilla FireFox 11.0 FINAL Stable Vers...
Windows 8 Transformation Pack 2.0 (Window 8 ကို In...
Internet Download Manager 6.10 Beta Full + Just Do...
Panda Internet Security 2012 PRO
Auto Hide IP v5.1.1.8 Full
Autorun Virus Remover v3.1 Full Version
Ultimate Windows Tweaker (ကွန်ပြူတာကို လိုသလို ချိ...
window7ရဲ့ Settings တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ထားချင်ရ...
Max All In One Keylogger Pro v3.5.8
Photoshop CS5 စာအုပ် နှင့် အခြားသော Photoshop စာအု...
Any Video Converter Ultimate 4.3.5 Full Version
Windows 8 Consumer Preview ISO images နှင့် USB မှ...
Adobe Photoshop 7.0 Ebook (မြန်မာလို)
Hide IP Easy 5.1.5.6
Windows သုံးနေရင်းက စက်နှေးသွားရင်
Repair Missing CD-DVD Drive (CD/DVD Drive ပျောက်နေ...
Re-Enable V2.0 (ဗိုင်းရပ်ကြောင့် (သို့) Error ကြော...
How to remove Facebook Timeline (facebook timeline...